Lonke uhlelo Lwami lokuphatha, uhlelo oluhlanganisa iminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha, lunezigaba ezintathu, noma izinkathi ezintathu: Inkathi yoMthetho ekuqaleni; Inkathi yoMusa (ephinde yaziwe ngokuthi Inkathi yokuHlengwa); neNkathi Yombuso ezinsukwini zokugcina. Umsebenzi Wami kulezi zinkathi ezintathu wehluka kokuqukethe ngokohlobo lwenkathi ngayinye, kodwa esigabeni ngasinye uhambisana nezidingo zomuntu—noma ukuqonda ngqo, wenziwa ngokwamaqhinga asetshenziswa uSathane empini engiyilwa naye. Inhloso yomsebenzi Wami ukunqoba uSathane, ukubonakalisa ukuhlakanipha Kwami nokuba namandla onke, ukuveza obala wonke amaqhinga kaSathane, ngalokho bese ngisindisa sonke isintu, esiphila ngaphansi kokubusa kwakhe. Kuwukukhombisa ukuhlakanipha nokuba namandla onke Kwami ngibe ngembula ububi bukaSathane obungabekezeleki. Ngaphezu kwalokho, kuwukufundisa izidalwa Zami ukuthi zikwazi ukwahlukanisa phakathi kokuhle nokubi, ukubona ukuthi nginguMbusi wazo zonke izinto, ukubona kahle ukuthi uSathane uyisitha sesintu, ophansi kunakho konke, omubi, nokwehlukanisa ngokunesiqiniseko phakathi kokuhle nokubi, iqiniso namanga, ubungcwele nokungcola, ubukhulu nobuphansi. Ngale ndlela, isintu esingenalwazi sizokwazi ukungifakazela ukuthi akuyimina owonakalisa isintu, futhi Yimi kuphela—iNkosi yendalo—ongasindisa isintu, engingabeka phezu komuntu izinto zokubathokozisa; futhi bazi ukuthi nginguMbusi wazo zonke izinto nokuthi uSathane ungomunye nje wezidalwa engazidala, wabuye wangiphendukela. Uhlelo Lwami lokuphatha lweminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha luhlukene izigaba ezintathu ukuze kutholakale umphumela olandelayo: ukuvumela izidalwa Zami zibe ofakazi Bami, zazi intando Yami, zibone ukuthi ngiyiqiniso. Ngakho, esigabeni sokuqala somsebenzi Wami ohlelweni Lwami lokuphatha lweminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha, ngenza umsebenzi womthetho, okwakuwumsebenzi lapho uJehova ayehola khona abantu Bakhe. Isigaba sesibili saqala umsebenzi weNkathi yoMusa emizini yaseJudiya. UJesu umele wonke umsebenzi weNkathi yoMusa; waba senyameni wabethelwa esiphambanweni, waphinda wangenisa iNkathi yoMusa. Wabethelwa ukuze agcwalise umsebenzi wokuhlenga, ukuqeda iNkathi yoMthetho nokuqala iNkathi yoMusa, ngakho-ke wabe esebizwa “ngeNkosi Ephakeme,” “uMnikelo wesono,” “uMhlengi.” Ngakho umsebenzi kaJesu wehluka ngokuqukethweyo emsebenzini kaJehova, yize ngokwesimiso babefana. UJehova waqala iNkathi Yomthetho, esungula isizinda—umsuka—somsebenzi kaNkulunkulu emhlabeni, futhi ekhipha imithetho nemiyalelo. Lokhu ngokubili emsebenzini awenza, futhi kumele iNkathi Yomthetho. Umsebenzi uJesu awenza eNkathini yoMusa kwakungekhona ukukhipha imithetho, kodwa ukuyigcwalisa, ngalokho engenisa iNkathi yoMusa futhi eqeda iNkathi Yomthetho eyayisihlale iminyaka eyizinkulungwane ezimbili. Waba ngumqambi, owezela ukuqala iNkathi Yomusa, kodwa umongo womsebenzi Wakhe wawusekuhlengeni. Ngalokho-ke izinto azifeza zazikabili: ukuvula inkathi entsha, nokuqedela umsebenzi wokuhlenga ngokubethelwa Kwakhe, ahamba ngemva kwakho. Futhi kusuka lapho iNkathi Yomthetho yafika ekugcineni kwase kuqala iNkathi Yomusa.
Okulandelayo: Amazwi Aya Kwabasha Nabadala